Sangeet Aayam | Nepali Stories
Sangeet Aayam – Usko Mrityu
साँझ ढल्दैछ। म झ्याल खोल्छु, हावाको एक चिसो झोका कोठाभित्र पस्छ। लाग्छ हावाको झोंकासँगै उसको सम्झना पनि कोठाभित्र प्रवेश गरेको छ। स्मृतिहरूको भेलले मलाई बगाएर पर कतै एकान्तमा पुर्यामउँछ। म उसको ओठ सम्झन्छु।
रात ढल्दैछ। समय बहकिदैछ। मात्र एकान्तमा रातलाई लिएर बस्नु शायद पागलपन नै हो क्यार! शायद अरु नै केही हुनसक्छ रातभरि भरि आफूलाई टाँगेर बाँच्नु। अनायास यो के? पानी परेजस्तो छ बाहिर। अघिसम्म त पानी पर्ने जस्तो मौसम नै थिएन, मात्र चिसो हावा बगिरहेको थियो। होइन पानीको छिटा त भित्रै पस्नै लाग्यो, झ्याल लगाउनु पर्योत। म उठ्छु। झ्याल तिर बढ्छु तर हातहरू भने सर्न नै मानिरहेका थिएनन्। स्मृतिको कुन सम्मोहनले तानेर मलाई फेरि पनि उसको नजिकै पुर्याैइदिन्छ।
‘पापा, त्यो फूल मलाई चाहियो, टिपेर ल्याउनोस् न।’
मैले उसलाई भन्छु, ‘पानी परिरहेको छ अहिले हुँदैन।’
ऊ एकदमै जिद्दी थियो, मेरो केही लाग्दैन। म फूलतिर बढ्छु र त्यसलाई टिपेर फर्किदा निथु्रक्क रुझसकेको हुन्छु। मेरा कपडाहरू पानीले लफ्रक्क भिजेको देखेर होला उसको हाँसोले रोकिने नाम नै लिएन। ‘थ्याक्यूं पापा!’ ऊ भन्दै थियो। उसको चञ्चल र कोमल हाँसोले त्यत्रो पानीले भिजाउन नसकेको मेरो मन चुर्लुम्म डुब्ने गरी भिजाएको थियो। मात्र संझना छ, पत्र–पत्र हुँदै उप्किरहेका।
ओहो! पानीले सिरानी पनि भिजाएछ। पानी त क्रमशः बग्दै गएर तन्नाभरि फैलिंदै गएछ। म फेरि उठ्छु। अब त झ्याल लगाउनै पर्छ नत्र पानी कोठाभरि फैलिनेछ। कत्रो पानी परेको? म बाहिर हेर्छु। बाढी नै आएजस्तो छ सडकमा। अनायास आर्कल्याम्पको प्रकाशमा नुहाइरहेको त्यो सेतो फूलमा मेरो आँखा पुग्छ। ठ्याम्मै उस्तै फूल! कत्ति फरक छैन, मानौं त्यो फूल यस फूलमा रूपान्तरण भएको छ अहिले। तर ….. खोइ, उसको हात सोझएको त्यो फूलतिर? खोइ, उसका ओठहरूले त्यो फूल टिप्ने अनुरोध गरेका? पीडाको अदृश्य उदासी कोठाभरि पोखिन्छ र सुस्त सुस्त बढ्नथाल्छ त्यसको गाढा रङ्ग। म चुपचाप अघिको फूललाई नियाल्छु र देख्छु उसको स्मृतिले व्यूँझाएको प्रतिबिम्बित रूपलाई।
‘बाबु, तँ अहिलेसम्म सुतेको छैनस्? के गरिरहेको यतिबेलासम्म?’
मैले भन्न खोज्छु ‘आमा, तँपाई पनि त सुत्नुभएको छैन नि!’ तर भन्दिन।
‘बाबु, गएको मान्छे अब फर्केर आउने होइन। नआउने कुरामा मन लगाएर मात्र के हुन्छ?’ मलाई थाहा थियो, यो कुरा आमाले आफैंलाई सान्तोना दिन भनिरहनु भएको थियो।
‘कसरी भुल्ने आमा उसलाई?’ मैले मनमनै आफूलाई दोहोर्याोउँदै थिएँ।
घरी–घरी आइरहने उदासीबाट बच्न म डी. एच. लरेन्सको कथासङ्ग्रह पढ्न थाल्छु। ‘दि रकिङ हर्स विनर’ भन्ने कथा त्यस सङ्ग्रहको शुरुमैं थियो। यस कथामा सानो केटो ‘पौल’को मनोविज्ञान बिगारेर उसकी असन्तोषी आमाले अन्त्यमा आफ्नै छोराको मृत्यु गराएकी कुरा थियो। यो कथाले झन् उसको मृत्युलाई ताजा गराउँछ, म पुस्तकलाई फ्यात्त मेचमा फाल्छु। किन हरेक कुरा उसको मृत्युसँग जोडिएर आउँछन्? के यसबाट बच्ने उपाय छैन? म साँच्चै नै यस्तो कुराको प्रतीक्षामा थिएँ कि कमसेकम उसको मृत्युले दिएको यातनालाई भुल्न सकुँ।
ऊ भन्दै थियो, ‘अङ्कल, आकाश आज किन स्कूल नआएको? आज हाम्रो रिजल्ट पनि भयो। अङ्कल सुन्नुहुन्छ? आकाश त स्कूलभरिमा सबैलाई टपेर बोर्ड फस्ट भयो नि!
एउटी सानी केटी मेरो सामुन्यमा आउँछे र जिद्दी गर्न थाल्छे। ‘भन्नुहोस् न अङ्कल, आकाश खोइ भन्या?’
सार्हैा जिद्दीवाल हुन्छन् केटाकेटीहरू। आफूले खोजेको कुरा पाउने त यिनीहरूको स्वभाव नै हुन्छ। मेरो आकाश पनि सार्हैज जिद्दी गर्थ्यो र पनि अत्यन्त प्यारो थियो। उसले जिद्दी गर्दा उमेर अनुसार कति सुहाउँथ्यो पनि। मैले परतिर हेरें, एकहूल चराहरू स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर उडिरहेका थिए।
केटाकेटीहरूको स्वर बढ्दै थियो। ‘अङ्कल, आकाश खोइ भन्या? हामीसँग किन नबोल्नुभएको अङ्कल?
‘बाबुनानी हो, आकाश छैन।’
मेरो कुरा खस्न नपाउँदै एकस्वरमा उनीहरूले सोध्छन्। ‘आकाश कहाँ गयो अङ्कल?’
‘बाबुनानी हो, आकाश त हामीलाई छोडेर टाढा गयो।’ मैले भन्न नचाहँदा नचाहँदै भन्छु।
‘अङ्कल, हामीले आकाशलाई बधाई दिन यी फूलहरू ल्याएका।’ ठूला ठूला आँखा भएकी केटीले फूलहरू मलाई दिदै भन्छे।
Posted in Sangeet Aayam
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Sangeet Ayam Literatures of Nepali Story Writer Sangeet Ayam Nepali Author Sangeet Ayam Nepali Katha Nepali Katha Usko Mrityu by Sangeet Ayam Nepali Kathakar Nepali Kathakar Sangeet Ayam Nepali Rachanakar Kathakar Sangeet Ayam Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Sangeet Ayam Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Sangeet Ayam Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Usko Mrityu by Sangeet Ayam Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Sangeet Ayam Sahityakar Sangeet Ayam Ka Nepali Katha Haru Sangeet Ayam - Usko Mrityu Sangeet Ayam's Nepali Story Usko Mrityu